Cultural Landscape - Ancient Pyu Cities
Ancient Pyu Cities » Cultural Landscape
Ma Thee Kya Gon (A.D 3th to A.D 4th)
September 18, 2013 - 5:07 am | Cultural Landscape
Comments Off on Ma Thee Kya Gon (A.D 3th to A.D 4th)
Ma Thee Kya Excavated Mound at Sri Ksetra
ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့တော်ဟောင်းများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေခံ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည့် မြို့ပြများ ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာ အတွက်ပါ အရေးပါသော ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေခံသည့် မြို့ပြတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကို အခြေပြုသည့် အားလျော်စွာ ထင်ရှာကန်ရှိနေသော ပျူခေတ်စေတီကြီးများ၊ ဗိသုကာလက်ရာမြောက် ဂူဘုရားများ၊ စာပေအထောက်အထားများ ဖြစ်သည့် ကမ္ပည်းတံဆိပ်၊ အရိုးအိုးစာ၊ ပိဋကတ်တော် ကောက်နုတ်ချက်ပါ ရွှေပေလွှာ များ၊ ကျောက်စာများ၊ ဗြဟ္မဏဘာသာရေးဆိုင်ရာကို ကိုယ်စားပြုရုပ်တု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြွများ၊ အနုသုခုမဆိုင်ရာ ကြေးရုပ်ငယ်များ၊ ငွေဒင်္ဂါးများ၊ ပျူအမှတ်အသား၊ စာအရေးအသားနှင့် လက်ရေးစင်းပါ ထင်ရှားသည့် အုတ်ချပ်များ၊ မြို့ပြအသွင်သဏ္ဍာန်နှင့် လက္ခဏာရပ်များသည် ပျူယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တန်ဖိုးများပင်ဖြစ်သည်။ မြို့တော် တည်နေပုံ၊ မြို့ရိုးတံတိုင်း၊ ကျုံး၊ မြို့ဝင်ပေါက် တံခါးများ၊ ရေအသုံးချမှုစနစ်နှင့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသော စနစ်များ စသည့် အထောက်အထားများသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ ဆိုင်ရာအတွက် အရေးပါသော ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေပြုသည့် မြို့ပြဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည်။
September 17, 2013 - 5:34 pm | Cultural Landscape, Monument
Comments Off on Baw Baw Gyi Pagoda
Baw Baw Gyi Pagoda is one of the earliest pagodas in the history of ancient monuments in Myanmar. Built in the early part of the Thayeykhittaya (Sri ksetra) Pyu Period and it is the earliest Pagodas of the Period.
According to the oral tradition and old chronicles the pagoda was built by King Duttabaung Bearing the name “Baw Baw”, it is mentioned in old chronicles that the relics of the Buddha are enshrined in it. Juding by its architectural style, epigraphic evidences and terra-cotta votive tablets is found in its environ, the possible date of its building is A.D 5th Century. No stone inscription describing its history has yet been found.
Except few places, the whole cylinderical structure is constructed with bricks. In the tunnel are brick steps in the wall by which one can go up.
It is similar in design and shape to the Dammate of Sanarth in India and the Nga Kwe Nadaung Pagoda of Bagan in Myanmar. This Pagoda is the care of Archaeology, National Museum and Library Department.